दरबार हत्याकाण्डपछि बन्द राजा वीरेन्द्रको निजी निवास अवलोकन गर्न पाइने - Pathibhara Channel
Sunday 16th , May 2021
दरबार हत्याकाण्डपछि बन्द राजा वीरेन्द्रको निजी निवास अवलोकन गर्न पाइने
Pathibhara Channel शनिबार, मंसिर ६, २०७७ | November 21st, 2020 फोटो फिचर, ब्रेकिंग न्युज, मुख्य समाचार, समाचार
काठमाडौं, ६ मंसिर । दरबार हत्याकाण्डपछि बन्द नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास ‘श्री सदन’ आइतबारबाट सर्वसाधरणका लागि अवलोकन खुल्ला हुने भएको छ ।
शनिबार दिउँसो २ बजे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले श्री सदन खुला भएको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने र आइतबारबाट सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।
आइतबारबाट ‘श्री सदन’ का साथै गणतन्त्र स्मारकसमेत अवलोकनका लागि खुल्ला हुने दाहालले बताए । २०७६ जेठ १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र स्मारक उदघाटन गरे पनि अवलोकनका लागि खुल्ला भएको छैन ।
श्री सदनमा के–के छन् हेर्नलाई ?
भनिन्छ श्री सदन राजा वीरेन्द्रकै डिजाइनमा बनाइएको थियो । २०२३ सालमा बनेको यो तीन तले भवनमा १२ वटा कोठा छन् । भुइँतलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निजी कार्यालय थियो ।
भान्सा कोठा, खाना खाने कोठा, मदिरा पिउने बार र विश्राम गर्ने कोठा पनि भुइँतलामै छ । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र पनि भुइँतलामै बस्दथे । उमेर पुगेपछि अलग बस्नुपर्ने नियमअनुसार दीपेन्द्र श्री सदनबाट त्रिभुवन सदनमा सरेका थिए । त्यसपछि उनको कोठा खाली थियो ।
श्री सदनको पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्र सुत्ने कोठा र रानी ऐश्वर्यको कोठा छन् । रानी ऐश्वर्यको कोठामा उनले हेर्ने गरेको टेलिभिजन, गीतका क्यासेट र क्यासेट प्लेयर छन् । दोस्रो तलामा कान्छा छोरा निराजन र छोरी श्रुतीका कोठा छन् ।
मोटर ग्यारेजमा हिटलरले वीरेन्द्रलाई उपहारस्वरुप दिएको गाडी राखिएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजा त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्रले चढ्ने गाडी पनि अवलोकन गर्न पाइने छ । त्यहाँ दीपेन्द्र, श्रुती र निराजनका खेलौना गाडीहरु पनि राखिएका छन् । वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको हेलिकप्टर र हवाईजहाज पनि अवलोकन गर्न पाइने छ ।
श्रीसदनबाटै गणतन्त्र स्मारकमा जान सकिन्छ । तर अहिले बीचमा पर्ने टुकुचा खोलामा पुल नबनिसकेकाले नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिएर नागपोखरी नजिकको पूर्वी गेटबाट गणतन्त्र स्मारक प्रवेश गर्नुपर्दछ । नयाँ पेज बाट
उपत्यकामा जेठ १३ सम्म निषेधाज्ञा, अत्यावश्यकबाहेकका सबै कार्यालय बन्द
उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा १५ दिन थपेको छ। जिल्ला प्रशासन...
विमला वलीले रोजिन् माओवादी, लुम्बिनीमा एमालेको बहुमत नपुग्ने
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेकी छन्...
विशेष अधिवेशनकै बीच गण्डकी प्रदेशका तीन सांसदलाई कोरोना
घर जान चाहनेका लागि दुई दिन समय दिएर उपत्यकामा कडा निषेधाज्ञाको तयारी
देव गुरुङ बाट चलचित्र दुस्प्रयासको पोस्टर सार्वजनिक गर्दै बिभिन्न व्यक्तिहरु सम्मानित
महासंघ अध्यक्षमा शर्मालाई ३ हजार ९२७ मतको अन्तरले पछाडि पार्दै पोखरेल विजयी, कसको मत कति? (सूचीसहित)
बादलतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले भनेः ममाथि बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरेँ (भिडियोसहित)
पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार १६७ जना संक्रमित थपिए, १ सय ८७ को मृत्यु
छिल्लो २४ घण्टामा थप ८ हजार १६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने...
कांग्रेस-माओवादीले वैकल्पिक सरकारको दावी नगर्ने, फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री !
३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैकल्पिक सरकार गठनको दावी...
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
राष्ट्रियसभा सदस्यमा थापा र देवकोटाको उम्मेदवारी दर्ता
जेष्ठ १ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
बैशाख ३१ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
बैशाख ३० गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
बैशाख २९ गते बुधबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल